အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်စသောနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များသည် အာမခံ မည်မျှပေးပေး ကမ္ဘာပျက်ပါကအတူတူလိုက်ပျက်ရမည့် ဘဏ်များသာ ဖြစ်သည်။ ဒါနဘဏ်တိုက်၌ အပ်ထားသောကုသိုလ်ဥစ္စာများကား ကမ္ဘာ ပျက်သော်လည်း မပျက်ပေ။ သံသရာတလျှောက် ကုသိုလ်ပြုထားသူနောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်၍ ကောင်ကျိုးပေးနေမည်သာဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်သည် အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ် စာသင်သားဘ၀က ၀က်သားဟင်း တခွက်ကို စာသင်သားတစ်ပါးအားလှူဒါန်းပြီး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကို အပ်နှံခဲ့သည်။ ထိုကုသိုလ်ဥစ္စာများသည် ယခု အသက် ၄၇ နှစ်တိုင်အောင်သုံး၍ မကုန်တော့ပေ။ ၁၃၇၃ခုနှစ် သင်္ကြန်တွင်းတရားစခန်း၌ ယောဂီ သုံးထောင့်တစ်ရာကျော် ၀င်ရောက်အားထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုယောဂီများအတွက်ခုနှစ်ရက်စာ အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းများကို အလှူမခံဘဲ သူ့အလိုလိုလာလှူကြသည်။ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းများဝင်ရောက်ခဲ့ရာ မြို့ကြီးနှစ်မြို့ကွယ်ပျောက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ မလှူရ မတန်းရသေးသော ဥစ္စာစည်းစိမ် တိုက်တာခြံမြေအားလုံးရေလှိုင်းတွေထဲ ပါသွားခဲ့သော်လည်း ဂျပန်လူမျိုးများ ပြုထားသည့်ကုသိုလ်ဥစ္စာများသည်ကား မပျက်မစီး ထာဝရတည်မြဲလျှက် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သံဃာများကိုဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းဖြင့် စိတ်ချရဆုံး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကိုအပ်နှံသင့်ကြ ပေသည်။
2009 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နှင့် ၆ ရက်နေ့ စင်္ကာပူစံတော်ချိန် ညနေ ငါးနာရီတွင် မုံလည်ဆရာတော်ဘုရား ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်ကို http://live.dhammathukha.com/ မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်သောကြောင့် တရားနာယူဖို့ အဆင်ပြေ အခွင့်သင့်ကြတဲ့ ဓမ္မမောင်နှမအပေါင်း တရားနာ ကြွရောက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အသိပေးလို့ နှိုးဆော် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ မေတ္တာဖြင့်ဝါ၀ါခိုင်မင်း'
ဧည့်သည်များ-( Since 3rd / August /2008)
အပတ်စဉ် အလှူဓါတ်ပုံများကို တင်ထားပါသည်။
လစဉ်အရုဏ်ဆွမ်းတစ်ရက်အလှူရှင်များစာရင်းများ-၁.ကိုသက်မြင့်ဦး+မကေသီလွင်၊သမီး-လွင်မာမင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ)-၇၅,၀၀၀ ကျပ် (အာရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၂.မခင်ငြိမ်းချမ်းဦး (မလေးရှား)-၇၅,၀၀၀ ကျပ် (အာရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)၃.မဖြိုးဝေခိုင် (ရန်ကုန်) - ၇၅,၀၀၀ ကျပ် (အာရုဏ်ဆွမ်းအလှူ)
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုပါလျှင် -(၁)ဦးကောဝိဒ (ဖုန်း- ၀၉၂၁၁၀၂၀၂) U Kovida Kovidaသဒ္ဓမ္မပါလဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၊လပြည့်ဝန်းလမ်း ၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး။ (၂)ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း(ဖုန်း- ၀၉၄ ၀၂၇၇၇၉၁၆) KBZ(S/OKA) -06912100 94071 (၃)မမြရည်ညို (စင်္ကာပူ) Mya Yee Nyo posb saving 247538267 Ph: 83281555 Email - myayeenyo@gmail.com (၄)မရွှန်းလဲ့မေ (စင်္ကာပူ) Shoon Le May Bank: POSB Saving 207-61370-3 PH: 8571 1007 Email: shoonle@gmail.com (၅)ကိုရန်နိုင်ဝင်း (ဂျပန်) YN Win လေးစားစွာဖြင့်-၀ါဝါခိုင်မင်းသဒ္ဓမ္မပါလစစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း-------------------------------------------------- Dr.Htein's Clinic အခမဲ့ဆေးခန်းသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုကြပါလျှင် - ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× ၁. Dr.ထိန်ဝင်း (Ph- 095 130 418) Htein Win ငွေလွှဲရန်- KBZ (တောင်ဥက္ကလာ) ၂.ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း (Ph- 094 02 777 916) Nan War War Mg ငွေလွှဲရန်- KBZ (တောင်ဥက္ကလာ) KBZ Account - 069 12100 94071 ၃.မနှင်းယုယုဝင်း Hnin Yu Yu Win(စင်္ကာပူ) posb saving 245-89631-0 Ph- +65-91826517 ၄.Dr.ထွေးထွေးယု (USA) Htwe H Yû Ph- +1 415 606 7928, Bank = wells fargo Paypal account : htwehtweyu@yahoo.com ××××××××××× ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်- Dr.Htein's Clinic အခမဲ့ဆေးခန်း
ပုံကို click ပါက ဆရာတော်ကြီးများ၏ တရားတော်များကို ဖတ်ရှု့နာယူနိုင်ကြပါသည်။
ဤပုံကို ကလစ်ပြီး ယာနယာဉ်အလှူရှင်မှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှု့ပီတိဖြစ်စွာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
ရေသန့်စက်အလှူ နှင့် အလှူရှင်များစာရင်း။
ပုံကိုကလစ်ပါက ရေသန့်စက်အလှူများအကြောင်း ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်။
ပုပ္ပါးတောင်ကလပ် ပုပ္ပားတောင် သမိုင်းကြောင်း *****ပုပ္ပားဟူသည်***** အနောက်တိုင်းသားတို့က နတ်တို့ပျော်စံရာ အိုလံပတ်စ်တောင် (Mt. Olympus, an abode of the Gods )...
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ပေါ့တလန်မြို့၊ သိရီမင်္ဂလာကျောင်းမှာ ၂ဝ၁၆-ခု၊ မေလ(၂၉)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ည (၈)နာရီ (၃၀)မိနစ်အချိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ မရမ်း...
ဆွမ်းလောင်းအသင်း သြဂုတ်လ နှင့် ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း-
Khine Khin Win shared သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း - စင်္ကာပူ's photo. July 18.
သဒ္ဓမ္မပါလစစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း သြဂုတ်လ နှ...
ဗုဒ္ဓဂယာ၊ဥရုဝေလတရားစခန်း အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ခြင်း။
ဗုဒ္ဓဂယာ ၊ဥရုဝေလတရားစခန်းတည်ဆောက်ရန်အတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာ (၅၀)နှင့် အထက်အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသာရ ဟောကြားသော သစ္စာတရားတော်များကို ပိုမို နားလည်စေဖို့ သက်သက် အတွက်သာ ရည်ရွယ်လျှက် ဥာဏ်မီသလောက် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုစ့်တစ်ခုမှာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်.. တိပိဋကယောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သူတော်ကောင်းဆောင်ပုဒ်လေး ဖတ်မိပြီး ...
စာရေးသူအနေနဲ့ ဘလော့ဂါ ဓမ္မမောင်နှမ ရဟန်းရှင်လူ များကို အမြဲတမ်း အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်ရင်း မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်၊ အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ပန်းကမ္ဘာ...
my channel of sing for u
သူတစ်ပါး ကောင်းတာ မကောင်းတာကို ဝေဖန်နေရမယ့်အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ကိုယ်ကောင်းအောင်ပဲ နေရမယ့်အချိန် ဖြစ်နေပါပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သေဖို့က တဖြည်းဖြည်း နီးလာပြီလေ။
Thanks for your greeting!!
R Zar Ni, One & Phyu Phyu
2011 memory အဲသည် တစ် ရက် က Holiday ထဲ ဝင် တယ်မနက် မိုး လင်ူအ် ဒို နီးရှား သွား မလို့ မလေး ရှား ဘက် က သွား ရင် စေိး သက်ာတယ် ဒါ ပေမဲ့ စကာ ပူ မှာနေ တော...
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကနေ ကိုယ်တိုင်သင်ခန်းစာ မယူတတ်သူဟာ လူမိုက်၊ သူတပါးရဲ့ အတွေ့အကြုံကနေတောင်မှ သင်ခန်းစာယူတတ်သူဟာ ပညာရှိ လို့ ဆိုကြရင် ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်အေ...
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း (၇)နှစ်ပြည့် သံဃာတော်အပါး(၁၅၀၀)ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲအတွက် ဒံပေါက်ပွဲ(၁၅၀၀) အလှူရှင်﻿များမှတ်တမ်း
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း မင်္ဂလာပါရှင်-
သဒ္ဓမ္မပါလ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၇) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် သံဃာ...
ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှင်သန်ခြင်း အခွင့်ကိုပေးတဲ့
ဒီအသက်အရွယ်ထိ နေထိုင်ခြင်း အခွင့်ကိုပေးတဲ့
တခါတုန်းက အိန္ဒိယပြည်မှာ စူရမ်ဆိုတဲ့ ဘုရင်တပါး စိုးစံသတဲ့။ သူ့လက်ထက်မှာ အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီး ဘေးနားက နိုင်ငံငယ်တွေကို သိမ်း၊ သူ့ကို အခွန်တွေ...
ခုတလော ဖြစ်နေပုံက ခဏခဏ မိုးတွေရွာတယ် ..တစိမ့်စိမ့်
ငုံ့ကြည့်လိုက်တိုင်း အုံ့ဆိုင်းမှိုင်းညို .. အမှတ်သည်းခြေ မရှိသလိုပဲ
ထင်ရာမြင်ရာ နေကလည်း ခြစ်ခြစ်တောက်ပူ.....
19thStreet ဒီလမ်းဟာ လူစုံတယ်။ စရိုက်စုံတယ်။ ဘ၀စုံတယ်။ ဒီလမ်းပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်သံတွေ၊ ရင်ဖွင့်သံတွေ၊ တီးတိုးငိုကြွေးသံတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတတ်တယ်။ ဒီလမ်းဟာ မူ...
လာဘ်တိတ်စေသောအကြောင်းတရားများ ဆိုပြီး Facebook မှာ တက်လာလို့ ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာတွေ ရေးထားသလဲ ဆိုတာကို ပြန် ဖောက်သည်ချရမယ် ဆိုရင်တော့...
Number of View: 692Mom & Baby Magazine, အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁) ကစ်တုန်က ငါးတန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကစ်တုန်ရဲ့ ကျောင်းနာမည် က ဝေဟင်ထွဋ်ခေါင် ဖြစ်...
When taking risk is safer than staying status quo
Most of us consider ourselves to be risk averse, but what we consider "safe" behavior often contains much more uncertainty than we suspect. That's because ...
လွတ်ပြီ... လွတ်ပြီ... ဖြီုးဖြိုးအောင် အပါအ၀င်... အထိမ်းသိမ်းခံ ဗ-က-သ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အားလုံး... ချွင်းချက် မရှိ... အချုပ်အနှောင်မှ လွတ်မြောက်ပြီ....
“အိမ်မက်” အိမ်မက်ကို အိပ်မက်နဲ့မျှားနေခဲ့ရင်း အိမ်မက်ဟာ အိပ်မက်နဲ့ နံရံတဖက်ခြားသွားခဲ့တယ်… အိမ်မက်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ မတွေ့နိူင်တဲ့အခါ အိမ်မက...
လူတွေဟာ နှစ်မီးနစ်စာ တစ်ယောက်မျက်ဝန်းထဲတစ်ယောက်ဝင်ရောက်ပြီးတဲ့အခါ
ချစ်သွားတတ်ကြသတဲ့။ သူမနဲ့သူကြား နှစ်မီးနစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ
စာမရေးဖြစ်တာလည်းကြာပြီ ကြာတာမှ တော်တော့်ကိုကြာပြီ ။ ဒါပေမယ့် အမြဲချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့စာမျက်နှာမှာ အချိန်နဲ့အမျှ သူငယ်ချင်းများကို သတိရလျှက်ရ...
We will be back soon ;)
Song Chan Moe
ကိုအောင်ဇော်ထိုက်မှ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့အတွက် အရုဏ်ဆွမ်းနှင့်နေ့ဆွမ်း အလှူတော်ငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၇၀ ကို မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း(စင်္ကာပူ)အ...
၂၀-ဒီဇင်ဘာ - ၂၀၀၃
*ရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ပြည်ပဆိုက်ရောက်ခန်းမ။*
*ကိုထွန်းသူရ *ရဲ*့*မျက်ဝန်းတွေပြူးကျယ်သွားသလို ကျမရဲ့ခြေလှမ်းတွေလည်း မှ...
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုမှာ အင်တာနက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ အချိန်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုရာ နေရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ ထက် တစ်နေ့ပိုမိုများပြားလာသော အင်တာနက်သုံးစွဲ...
Fashion Blog ( Wai)
My prettiest sista
The best gift my parents had given me in life is no other than giving me my baby sista. We grew up together and shared everything from parents to clothes. ...
(၁.၉.၂၀၁၃) တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၏ (၁၂)ကြိမ်မြောက် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးအလှူရှင်များစာရင်း-
(၁.၉.၂၀၁၃) တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၏ (၁၂)ကြိမ်မြောက် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးအလ...
ဒါက ဓာတ်ပုံကို ယူသုံးထားတယ်
ဂူဂယ်မှာ ကြက်တောင်ပံဟု ရိုက်လျင် မြရွက်ဝေတင်ထားသော ဓာက်ပုံ ထွက...
ဒီလိုနဲ့ပဲ မီးခိုးငွေ့တွေကြား ကျွန်တော် ဒေါင်လိုက်ကြီး မျောရတော့မှာလား မေမေ။ (မင်းခိုက်စိုးစံ)
အိပ်မက်ခိုက်မှာ မီးခိုးနဲ့ ကြပ်တိုက်ချင်တိုက်ပစေ ဒီညကို ငါ အ...
မှောင်…တယ်… အလင်းရောင်ရယ်… ဆိုလို့ မင်းကို ပြုဖို့ ရှိစုမဲ့စု စုထားတဲ့ ဥပက္ခာနုနုလေးပဲ… ခပ်လဲ့လဲ့ ရှိလေရဲ့… ကွယ်… ဒီလိုနဲ့ မျက်စိစုံမှိတ် အားတင်းအိပ်လဲ မနက်...
မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ပရဟိတအဖွဲ့
စဉ် အလှူရှင်အမည် အလှူငွေ ၁ ဦးဇော်လ [...]
ချစ်စဖွယ် ဖြူလွလွလေး ထွေးထွေး
တစ်ဘဝလုံး ဆောင်းချည့် တွေ့ရတော့မှာလို…
တနေ့က မြို့ထဲကို အထည်သွားပို့တယ်။ အထုပ်တွေနဲ့မို့လို့ အဲကွန်းbus ပဲစီးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ၈၆ တက်စီးလိုက်တယ်။ ကားက ဘေးဖက် ၂ ဖက် မျက်နှာချင်းထိုင်စီးရတဲ့က...
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလအတွက် ကဗျာဆရာမောင်အောင်ပွင့်ကို ရသအလင်းမှ ဂုဏ်ပြုငွေ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း
*ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်၂၀၁၂ဖြစ်ပါစေလို့ ရသအလင်းအဖွဲ့သားတွေက ဆုမွန်ကောင်း* တောင်းလိုက်ပါတယ်။ ရသအလင်းအနေနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ ဆရာလှသန်းနဲ...
မိုးကျရွှေကိုယ် မဟုတ်ပေမဲ့ 
ဂုမ္ဘာန်တစ်ထောင် အချစ်အားနဲ့ 
နန်းထိုက်တဲ့တော်ဝင်ကို
ပန်းမဏ္ဍိုက်မှာ ခူးခွင့်ရခဲ့ သူပါ . . . . .
တောက်ပတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါး
KM DT01 Oval Shape Wooden Dining Table (140x105cm) - 399.00
KM4848 Wooden Dining Chairs - 75.00 x 4pcs = 300.00
Bangkok International Implant Symposium & Asia-Pacific Academy of Implant Dentistry Congress
အင်း... ခေါင်းစဉ်ကြည့်တာနဲ့တင် ဘာရေးတော့မယ်ဆိုတာ ရိပ်မိလောက်ရောပေါ့နော့်။ ဘ၀ကံခေလေသူမို့ ရုပ်ရည်လေးသနားကမားရှိတာတောင် မစွံ့နိုင်ရှာသေးသူလေးပါခင်ဗျာ။ တကယ်ပါ...
ရှေ့ တလှမ်း တိုးပြီးတိုင်း
နောက် တလှမ်း ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရှိတဲ့ လမ်း
သားထူးမြတ်လင်း ၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့
သားလေး ထူးမြတ်လင်းဟာ ဒီနေ့ဆို ၂ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ၂ နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာတောင် ဒုတိယနှစ်မှာ အတော်လေး ပင်ပန်းစွာ ဖြတ်သန်းလာရတယ် ဆိုရပါမယ်။ ဒီလို မိသားစုမ...
*သူ ပိုပြီး ရနေတယ်*
ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ...
မျှော်လင့်ခြင်း မိုးကောင်းကင် ပရဟိတ အဖွဲ့
Dr.Htein's Clinic အခမဲ့ ပရဟိတဆေးခန်း
မနက်က ဓါတ်လှေခါးထဲမှာ ခြင်တစ်ကောင်နဲ့ တွေ့တယ်။ ဓါတ်လှေခါးထဲမှာ ခြင်တွေ့တာ ဘာများ ထူးဆန်းသလဲ။ အဲဒီ “ခြင်” ဆိုတဲ့ သေးသေးကွေးကွေး ငတိအကြောင်းကို လူတိုင်းသိကြတ...
အချစ်ဆိုတာ….. မောင်နှမ ညီအစ်ကိုချင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် နားလည်ပေးတတ်တာကိုဆိုလိုတ...
ကောင်းကင်ပြင်၌ တိမ်အညစ်အကြေးတို့ကင်းစင်နေ၏။ လပြည့်ခါနီး လ၀န်းကြီးသည်လည်း ကြယ်ပေါင်းစုံဝန်းရံခပြီး တင့်တယ်စွာ ကျက်သရေအသွင်ကို ဆောင်နေ၏။ ညကာလ...
ဒီအတိုင်းလေးပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်လို့နေပါ။ အသစ်မွေးဖွားလာတဲ့ ကြယ်ပြာတွေကို ကြယ်နီတွေက ကြိုဆိုနေသံကို ကြားရလိမ့်မယ်။ ထာဝရဆိတ်ငြိမ်ရာ ကောင်းကင်ထဲက နက်မှောင်ြ...
မန္တလေးသူဖြစ်တဲ့ကျွန်မ အညာအစားစာလေးတွေအရမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ ဘယ်တော့မှမရိုးနိုင်တဲ့သီးသီးလဲပါတယ်။ငယ်ငယ်ကနေခဲ့တဲ့အိမ်ကအမေရိကန်သံရုံးနဲ့နီးေ...
သူတို့နေမကောင်းမှာ မတော်တဆတခုခုဖြစ်မှာ ကျောင်းမှာသူများအနိုင်ကျင့်မှာ တွေတွေးပြီးစိုးရိမ်လိုက်ရတာ သူတို့ကျောင်းမှ...
[image: Nge Naing's photo.]
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ (၈၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်
ဒီနေ့ ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်နဲ့ ၈၂...
မေ ၂၈ ညကစ ဇွန်လ ၈ ရက်ညအထိ
ဇွန်လ ၉ ရက် နေ့ ခင်း အေအန်အေ လေယာဉ်ပေါ်မှာ
ပြီး ဇွန်လ တစ်လလုံးလုံး
Tokyo Kawaii blog
ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ချက်နည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာ ဒီနည်းလေးကတော့ ဒီရောက်မှ ရှမ်းမ ညီမလေး တစ်ယောက်အိမ်မှာ သွားစားရင်း ကြိုက်လို့ ချက်စားတဲ့ နည်းလေးပါ။ ကျောင်းမှာပါ...
What is my plan? Yes, it isasort of idiotic question. Who will answer it? Nobody.
I have been in Britain for overadecade, during which period I encount...
ကျွန်မက ဗဟန်းသူစစ်စစ်၊ စစ်တာမှ ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ တာဝါလိန်းဆေးရုံမှာ ကျွန်မကို မွေးခဲ့တာ။ ဗဟန်းမှာ မွေး၊ ဗဟန်းမှာပဲ ကြီးခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ ဒါေ...
The *L'oreal Colour Riche Collection Star lipsticks* available in the Philippines were specially chosen to suitawide array of Filipina skintone and hair ...
ဗိုက်တလုံးနဲ့ မွေးခါနီးလူကို ဘေဘေ က BPP-Challenge လုပ်ထားတာမို့လက်ရှိ အခြေ အနေကို ထင်ဟပ်စေမယ့် ပုံလေးပဲ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ် .. ဘာလီသွားတုံးက ရိုက်ခဲ့တဲ...
*" နောက်ကြောင်းပြန်ကြသူများသို့ ... " *
ဒီဘ၀မှာ Back Gear မပါဘူး...
ကိုယ်မြင်သမျှ"ရှေ့သို့ "ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ့ချည်း...
"ဘယ်တော့မှ"လို့ ပြောင်းလဲ နားလည်လိုက်ရပြီ
မင်းမမြင်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာ မင်းအတွက် ကာရံတွေနဲ့
မင်းမထင်တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာ မင်းအတွက် သံစဉ်တွေဖွဲ့
ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်း ကင်းမဲ့တဲ့ မင်းဆီမှာတော့...
မဟာဆန်သူကြီး ရဲ့ ပန်းဝတ်မှုံလေး
အောက်တိုဘာတစ်လလုံး လူမမာဖြစ်နေတာ လကုန်ခါနီးလောက်မှနေကောင်းသွားပါတယ်။
Hi good morning to all of you. My voice isabit ...
ဆားချက်တာ (ရေးထားပြီး မတင်ဖြစ်တာလေးတွေ ပြန်ရှာပြီး တင်တော့ up to date တော့ မဖြစ်ဘူးကွယ် :D) လူတွေ ပြောနေကြတယ်... အကြော်စုံကို ကြွပ်အောင် ဆီပူအိုးထဲ ရေသန်...
ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်း မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း (စင်ကာပူ) အတွက်အလုပ်တွေကူနေရလို့ ကိုယ့် Blog လေးကိုလည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်တင် အလုပ်ရှုပ...
စကားဝါမြေတေးဥယျာဉ် မြန်မာ Classical သီချင်းများ
နှစ်သက်မိသော မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၏ ကဗျာများ
ကျွန်မနှစ်သက်မိသော မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၏ ကဗျာလေးများကို ရွေးချယ်ကာ ပြန်လည်စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝေး လွမ်းမျက်ရည်ဝေဒန...
ပြေတီဦး + အိန္ဒြာကျော်ဇင် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ
ပြေတီဦး+အိန္ဒြာကျော်ဇင် မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ပုံများကို အန်ကယ်လ်ဦးဝင်းငြိမ်းထံမှ ခွင့်တောင်းပြီး ပြန်လည်မ...
“သမီးလေး ခိုင် ” နားဆင်ဘို့
“သမီးလေး ခိုင်” နားဆင်ဘို့ မေမေ့ရဲ့လက်ဆောင်.... From Sing For You..အမေ့ပုခက်လွှဲ ( ၂၄) ပစ္စည်း ပဌာန်းဒေသနာတော်
( ၂၄) ပစ္စည်း ပဌာန်းဒေသနာတော် ပုံများကို coralchitthu.blogspot.com မှ ကူးယူ မျှဝေပါသည်။
ကျွန်မရဲ့အမှတ်တရလေးများဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်လေးတွေစရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် -၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်းမှာ မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အများကြီးရခဲ့သလို ချစ်စရာေ...
Name - War War Khaing Min @ Nan War War MgNationality- MyanmarReligion-BuddhismE.mail-nanwarwarmg2009@gmail.com
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဘုံဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်းနဲ့ အလှူငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း။
အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအား ပုံကို Click ပြီးကြည့်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
ဗုဒ္ဓဂယာ ဥရုဝေလ တရားစခန်း အလှူရှင်များစာရင်း-
ပုံကိုကလစ်ပြီး အလှူရှင်စာရင်းမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှု့နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
War War Khaing Min@Nan War War Mg
Myanmar female singers
ထိုင်ခုံအလှူရှင်များ နှင့် အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်း
Have A Nice Weekend. :D
*သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ*
နုပျိုလှပတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြစေဘို့...
ဂျပန်ဆောင်း နဲ့ 温泉 ( Onsen) ရေပူစမ်းစိမ်ခြင်း။
2010- စံဇာဏီဘို တစ်နှစ်စာဗေဒင်ဟောစာတမ်းများ
နတ်ဆိုးကျိန်စာနဲ့ ကတဲ့ကဝေ ( စာရေးသူ-မိုးကုတ်သား)
My memories , Japan(2005-2010)
Hong Kong(Ocean Park)
Japanese school in Singapore
Japanese school in Sg Labels
ကျွန်မဖတ်ဖြစ်သော ဓမ္မစာပေများကို မျှဝေခြင်း
မျှဝေခြင်း ( အထူးပို့စ်)
ကျမ ရဲ့ သမီးလေး
ဗုဒ္ဓဂါယာခရီးစဉ် ( ၂၀၁၁)
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၃)နှစ်ပြည့်အလှူပွဲ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဘုံဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း
sakura dental implant center
DENTAL IMPLANT TRANING COURSE
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၂)နှစ်ပြည့်အလှူပွဲ
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း (၄)နှစ်ပြည့်အလှူပွဲ
နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု ပရဟိတဖောင်ဒေးရှင်း
မေတ္တာရှင် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု ဖောင်ဒေးရှင်း
23-6-2010 တနလာင်္ဆွမ်းပတ်အလှူ နဲ့ ဆွမ်းဟင်းခွက်များအလှူ
C box မှာအရုပ်ကလေးတွေထည့်ရအောင်
Earth hair salon (Japan)
How To Sing In Sing For You
စင်္ကာပူ၊မလေးရှားမှ ရာသက်ပန်ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူရှင်များစာရင်း
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ၂ နှစ်ပြည့် အလှူပွဲ(၁၁.၇.၂၀၁၁)
မရမ်းချောင် အနာကြီးရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အလှူ
ဦးလှထွန်း မေတ္တာရိပ်မွန် ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း
မေတ္တာရှင် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးထောက်ပံ့မှု ဖောင်ဒေးရှင်း အလှူရှင်မှတ်တမ်း
မေတ္တာသုတ် ၊ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ်
ရေသန့်စက်အလှူ ( စတုတ္ထအကြိမ်)